Tombanan’ny Sampam-Pitsikilovana Zambiana Ho “Mahasintona Indrindra” Ny Watchdog · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2012 2:31 GMT
Nahazo “fanamarinana” avy amin'ny loharanom-baovao tsy nosainina hanao izany, satria avy amin'ny Sampam-piarovana sy fitsikilovana Zambiana fantatra amin'ny hoe Biraon'ny Filoha [Office of the President (OP)] izay mametraka azy ho loharanom-baovao mahasintona indrindra ao amin'ny firenena ny vohikalam-baovaon'olo-tsotra Zambian Watchdog.
Ny tantara iray ao amin'ny habaka Zambian Watchdog izay raha ny marina nahazo torohevitra avy amin'ny loharanom-baovao samihafa, izay jerena fa marina ny ankamaroany, hoy ny tatitra fanao isam-bolana ataon'ny fitsikilovana tafavoaka ho hitan'ny hafa fa ny mampalaza ilay habaka dia noho ny fijoroany mitsikera ny fitondrana ankehitriny sy ny fivoahan'ny vaovao farany hita eo noho eo ao amin'ny habaka. Tsy azo amarinina moa ilay tatitra tafavoaka.
Fangon'ny Zambian Watchdog
Ny habaka, izay tafiditra anaty fifandirana amin'ny governemantan'ny Patriotic Front (PF), eo amin'ny fitondrana hatramin'ny septambra 2011, dia efa nisy nisovoka indray mandeha, izay heverina fa nataon'ny olon'ny fitondrana. Toy izao no voavaky ao amin'ny fitantarana:
Asehon'ny tatitra fa ny Watchdog no matetika no voalohany mamoaka vaovao mafana amin'ny zava-mitranga ao Zambia ary mahatratra ny vazan-tany efatra ao amin'ny firenena ao anatin'ny minitra vitsy ny vaovao mivoaka ao amin'ny habaka noho ny fisian'ny aterineto amin'ny finday.
Lazain'ny fitantarana ihany koa :
Lazaina ho mampiasa ny Watchdog ihany koa ny depiote hanamora ny fikarohany. Mipetraka sy mamaky ny fanehoan-kevitra rehetra mandalo ao amin'ny habaka ny depiote ary misy ny sasany maka ny fanehoan-kevitra hitany ao amin'ny habaka hiadian-kevitra ao amin'ny antenimiera. Mandray ny hevitra ho tahaka ny heviny manokana ry zareo. Maro amin'ny depiote no maka lefitra, izay matetika ny zanany ihany, hamaky sy hanao fehin-kevitra amin'izay hevitra hitany ao amin'ny Watchdog ho azy ireo.
Ary ho an'ireo afa-miditra ao amin'ny habaka, izao no voalaza:
Asehon'ny tatitra avy eo fa ny ankamaroan'ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasa hafa ao amin'ny governemanta dia manomboka ny ora fiasany amin'ny alalan'ny fijerena izay ao amin'ny Watchdog. Maro ny olona voalaza ho miprinty lahatsoratra avy ao amin'ny habaka ary manome azy ho an'ireo izay tsy manana aterineto na mandeha miadana ny aterinetony, printy hoentina sy hovakiana any an-trano. Lazain'ny tatitra fa saika ny solosaina rehetra hatrany amin'ny Lapam-panjakana ka hatrany Luwingu izay misy aterineto dia asehon'ny tantaran'ny fiserana [na fitetezana] (browser history) fa nisy olona nijery Watchdog tao.
Raha tsongaina ny Google Analytics, fitaovana entina mandrefy ny antontanisan'ny fidirana amin'ny habaka, dia lazain'ny fitantarana :
Ohatra, amin'ny 1.264.690 nitsidika ny Watchdog tao anatin'ny dimy andro farany, 831.478 no niserana avy tao Zambia raha 88.430 avy any UK, 76.818 avy any Etazonia, 40.478 avy any Afrika Atsimo, 20.317 avy any Namibia, 18.360 avy any Isiraely, 10.963 avy any Aostralia, 9.368 avy any Canada, 8.071 avy any Botswana. Antontanisa hafa: Alemaina 6.919, Shina 6.328, Nigeria 6.248, Rosia 5.610, Kenya 5.010, Holandy 4.051, Danemarka 3.566, Italia 3.411, Frantsa 3.385, Soisa 3.291, Tanzania 3.181, Norvezy 3.083, India 3,036, Belzika 2.652, Zimbabwe 2.441, Japana 2.300, Malaysia 2.244, Ethiopia 2.061, Emirà Arabo Mitambatra 1.976, Kongo [RDC] 1.921
Ahitana dera sy fanatsinontsinoavina ny hevitry ny mpamaky. Pankolobwato nanana izao tsy maintsy holazaina [tsy manana rohy maharitra amin'ny hevitra apetraky ny mpamaky ny habaka]:
Mirehareha amin'ireo antontan ireosy ny fitomboany aho. Misy ny manaprinty azy ho an'ny hafany. Ilainay ho fantatry ny mpiray tanindrazana na mahay mamaky teny izy na tsia ny MAHAFANTATRA hoe iza no iza ao am-bala. Farany, torohevitra ho an'ny ZWD, azafady mba ataovy amin'ny fiteny 3 na 4 ny lahatsoratra be mpamaky ao amin'ny ao aminareo mba hahalala vaovao ny renibeko any ambanivohitra. Ho ela velona ny Watchdog tamin'ny fakana ny toerana banga navelan'ny [tompon'ny Post, Fred] mmembe
Mifanohitra amin'izany ny filazan'ny mpamaky iray milaza ny tenany ho Bronze:
famoahana tsy nilaina indrindra tamin'ny Tantaran'i Zambia ZWD….Sata torana tao Nalolo, Fisher lasa governoran'ny [Banky Foibe], Tsy hivarotra vola Euro i Zambia noho ny tsy fahaiza-mitantana… ary mbola misy maro hafa tsy misy dikany. Anontanio fotsiny aho dia omako hafa ianao. 20% ny marina…eny eny mamaky ny ZWD isan-tsegondra izahay hihomehezana amin'ny lainga sy ny fahadalanareo……
Niatrika fandrahonam-panakatonana avy amin'ny governemanta ny Zambian Watchdog. Minisitra roa avy ao amin'ny governemanta ny tratra tamin'ny camera ho nijery ny habaka nandritra ny fivoriana ofisialy.